Jizọs bụ Nlereanya nye anyị - IntegritySyndicate.com
Mbido Ịdị n'otu nke Akwụkwọ Nsọ Jizọs bụụrụ anyị ihe nlereanya
1. Dị ka Jizọs, anyị ga -abụ otu na Nna
2. Dị ka Jizọs, e zitere anyị n'ụwa
3. Dị ka Jizọs, anyị abụghị nke ụwa a
4. Dịka Jisọs, anyị nwere ike jupụta na uju niile nke Chineke
5. Dịka Jizọs, anyị nwere ike bụrụ onyinyo Chineke
6. Dị ka Jizọs, anyị na -ekerịta n'ebube nke Chineke zubere site na mmalite nke okike
7. Dị ka Jizọs, a hụrụ anyị n'anya ma gọzie anyị site na ntọala nke ụwa
8. Dị ka Jizọs, anyị bụ ụmụ Chineke site na mbilite n'ọnwụ
9. Dị ka Jizọs, anyị bụ ụmụ Chineke site na mmụọ nke Chineke
10. Dị ka Jizọs, mmụọ Chineke tere anyị mmanụ
11. Anyị na -anwụ, na -eli, na -akpọlite ​​na Kraịst
12. Jizọs bụ ọkpara nke ọtụtụ ụmụnne - ndị ga -eketa alaeze - ndị nchụàjà nye Chineke na Nna ya
Jizọs bụ ihe nlereanya nye ndị na -eso ya. Ọtụtụ nkọwa nke Jizọs metụtakwara ndị nọ na Kraịst. Ọtụtụ okwu metụtara Jizọs gbasara ndị na -eso ụzọ ya.
Ọ bụghị naanị na Jizọs sịrị, “Mụ onwe m na Nna m bụ otu” (Jọn 10:30), o kpere ekpere nye Nna maka ndị bụ ndị na -eso ụzọ ya, “ka ha wee bụrụ otu, dị ka anyị bụ otu.” (Jọn 17: 11) 17) na maka ndị ga -ekwere site n'okwu ha, "ka ha niile wee bụrụ otu, dị ka gị, Nna, nọ n'ime m, mụ onwe m dịkwa n'ime gị, ka ha wee dịrị n'ime anyị" (Jọn 21:17) , "Ka ha wee bụrụ otu dị ka anyị bụ otu, mụ n'ime ha na gị n'ime m, ka ha wee bụrụ otu zuru oke." (Jọn 22: 23-XNUMX)
Ịsị “Mụ na Nna m bụ otu” pụtara na ịsị “Nna m nọ n'ime m na m nọkwa n'ime Nna m.” (Jọn 10:30 + Jọn 14:10) Mgbe Jizọs kpere ekpere ka anyị niile bụrụ otu, o kpekwara ekpere ka anyị nọrọ n’ime Nna anyị, sị: “Dị nnọọ ka gị onwe gị, Nna, dị n’ime m, mụ onwe m dịkwa n’ime gị, ka ha nwekwara ike ịdị n'ime anyị." ( Jọn 17:21 ) Ma, “Mụ onwe m n’ime ha, gị onwe gị kwa n’ime m, ka ha wee ghọọ otu n’ụzọ zuru okè.” (Jọn 17:22-23) Na mbụ na Jọn, mgbe Jizọs na-ekwu banyere ụbọchị a ga-enye Mmụọ Nsọ, o zoro aka n’otu echiche ahụ nke ịdị n’otu mgbe o kwuru, sị: “N’ụbọchị ahụ, unu ga-amarakwa na m nọ n’ime m. Nna, Gi onwe-gi kwa nimem, Mu onwem kwa nime Gi. (Jọn 14:20) Echiche nke Nna ịdị n'ime anyị na anyị ịnọ n'ime Nna ahụ bụkwa isi isiokwu nke akwụkwọ ozi mbụ nke Jọn. Amaokwu ndị na-esonụ na 1 Jọn na-eme ka a ghọtakwuo otú onye odee si chọọ ka anyị ghọta echiche nke ịbụ otu:
Ka ihe unu nụrụ site na mmalite dịrị n'ime unu. Ọ bụrụ na ihe unu nụrụ site na mmalite na -anọgide n'ime unu, mgbe ahụkwa unu onwe unu ga -anọgidekwa n'ime Ọkpara ahụ na n'ime Nna ahụ. (1 Jọn 2:24)
Ugbu a, ụmụntakịrị, nọgidenụ n'ime ya ... onye ọ bụla nke na -eme ezi omume bụ onye a mụrụ ya. (1 Jọn 2: 28-29)
Nka bu kwa ihe O nyere n'iwu, ka ayi kwere n'aha Ọkpara -Ya Jisus Kraist, hu kwa ibe -ayi n'anya, dika O nyeworo ayi n'iwu. Onye ọ bụla nke na -edebe ihe o nyere n'iwu na -anọgide n'ime Chineke, Chineke na -anọgidekwa n'ime ya. Ọ bu kwa nka ka ayi ji mara na Ọ nānọgide nime ayi, site na Mọ Nsọ nke O nyeworo ayi. (1 Jọn 3: 23-24)
Ọ dighi onye ọ bula huworo Chineke mb ;e ọ bula; ọ bụrụ na anyị hụrụ ibe anyị n'anya, Chineke na -anọgide n'ime anyị, ịhụnanya ya zukwara oke n'ime anyị. (1 Jọn 4:12)
Site na nke a ka anyị ji mara na anyị na -anọgide n'ime ya, na ya onwe ya n'ime anyị, n'ihi na o nyere anyị mmụọ ya. (1 Jọn 4:13)
Ya mere, anyị amatala ma kwere n'ịhụnanya ahụ Chineke nwere n'ebe anyị nọ. Chineke bụ ịhụnanya, onye ọ bụla na -anọgidekwa n'ịhụnanya na -anọgide n'ime Chineke, Chineke na -anọgidekwa n'ime ya. (1 Jọn 4:16)
Ọ bụ n’okwu a ka anyị kwesịrị ịghọta ihe Jizọs bu n’obi na Jọn 14:9-11 mgbe ọ sịrị: “Ọ bụrụ na unu ahụwo m, unu ahụwo Nna m. Ùnu ekweghi na Mu onwem nọ nime Nnam, Nnam nọ kwa nimem? Okwu m'nāgwa unu, ọ bughi n'akam ka m'nēkwu: kama Nnam Nke bi nimem nālu ọlu-Ya. Kwere m na m nọ n’ime Nna ma Nna m nọkwa n’ime m.” Ya mere, anyị na-ahụ na Jizọs ekwughị na ya bụ Chineke kama ọ na-azọrọ na ya bụ “otu ya na Nna ya” dị ka ohu na onye nnọchianya nke Chineke. N'otu aka ahụ na Jizọs bụ "otu na Nna," anyị ga-abụ "otu na Nna". Nna ahụ ga-anọrịrị n’ime anyị n’otu aka ahụ Nna ahụ nọ na Kraịst. Anyị ga-anọrịrị n’ime Nna n’otu aka ahụ na Jizọs nọ na Nna. Chineke Nna anyị, Jizọs na anyị - anyị niile ga-na-na ibe. ( Jọn 17:21 ) Anyị nile ga-abụ otu n’ụzọ zuru okè. (Jọn 17:23)
John 10: 27-30 (ESV), Mụ na Nna bụ otu
27 Atụrụ m na-anụ olu m, amakwaara m ha, ha na-esokwa m. 28 Mu onwem nēnye ha ndu ebighi-ebi, ha agaghi-ala n'iyì mb͕e nile, ọ dighi kwa onye ọ bula gānara ha n'akam. 29 Nna m, onye nyere m ha, ka ihe niile ukwuu, ọ nweghịkwa onye nwere ike ịnapụ ha n'aka Nna m. 30 Mu na Nna bu otu. "
John 10: 35-38 (Nna) nọ n'ime m, mụ onwe m nọkwa na Nna
35 Ọ bụrụ na ọ kpọrọ ha chi onye okwu Chineke bịakwutere ya — Akwụkwọ Nsọ enweghịkwa ike imebi— 36 ùnu na -ekwu maka onye Nna ya doro nsọ zite n'ụwa, 'Ị na -ekwulu Chineke,' n'ihi na m kwuru, 'Abụ m Ọkpara Chineke'? 37 Ọ bụrụ na m adịghị arụ ọrụ Nna m, unu ekwela. 38 ma ọ bụrụ na m na -eme ha, n'agbanyeghị na unu ekweghị na m, kwere ọrụ ndị ahụ, ka unu wee mara ma ghọta nke ahụ Nna nānọ nimem, Mu onwem nọ kwa nime Nnam. "
JỌN 17:11, ka ha we buru otù, dika ayi onwe -ayi bu otù
11 Anọkwaghị m n'ụwa, ma ha nọ n'ụwa, m na -abịakwutekwa gị. Nna dị nsọ debe ha n'aha gị nke i nyere m, ka ha we buru otù, dika ayi onwe -ayi bu otù.
(Jọn 17: 20-23) Ka ha niile wee bụrụ otu, dị ka gị, Nna, nọ n'ime m, mụ onwe m dịkwa n'ime gị, ka ha wee dịrịkwa n'ime anyị.
20 “Achọghị m maka ihe ndị a naanị, kamakwa maka ndị ga -ekwere na m site n'okwu ha, 21 ka ha nile we buru otù, dika Gi onwe -gi di nimem, Nna, na Mu onwem di kwa nime gi, ka ha onwe -ha we di kwa nime ayi., ka ụwa wee kwere na ọ bụ gị zitere m. 22 Ebube nke I nyewo m ka m nyeworo ha, ka ha we buru otù dika ayi onwe -ayi bu, 23 Anọ m n'ime ha, gị onwe gị n'ime m, ka ha wee bụrụ otu, ka ụwa wee mara na ọ bụ gị zitere m, hụkwa ha n'anya dị nnọọ ka ị hụrụ m n'anya.
1 Jọn 2:24, Ọ bụrụ na ihe ị nụrụ site na mbido na -adịgide n'ime gị, mgbe ahụ gị onwe gị ga -anọgidekwa n'ime Ọkpara na n'ime Nna.
24 Ka ihe unu nụrụ site na mmalite dịrị n'ime unu. Ọ bụrụ na ihe unu nụrụ site na mmalite na -anọgide n'ime unu, mgbe ahụkwa unu onwe unu ga -anọgidekwa n'ime Ọkpara ahụ na n'ime Nna ahụ.
1 Jọn 2: 28-29, Nọgidenụ n'ime ya-onye ọ bụla nke na-eme ezi omume
28 Ma ugbu a, ụmụntakịrị, nānọgide nime ya, ka anyị wee nwee obi ike mgbe ọ pụtara, ka anyị ghara ịla azụ n'ihere ya n'ọbịbịa ya. 29 Ọ bụrụ na ị maara na ọ bụ onye ezi omume, ị pụrụ ijide n'aka na onye ọ bụla nke na -eme ezi omume bụ onye a mụrụ ya.
(1 John 3: 23-24), site na nke a anyị maara na ọ na-ebi n'ime anyị, site na mmụọ nsọ
23 Nka bu kwa ihe O nyere n'iwu, ka ayi kwere n'aha Ọkpara -Ya Jisus Kraist, hu kwa ibe -ayi n'anya, dika O nyeworo ayi n'iwu. 24 Onye ọ bụla nke na -edebe ihe o nyere n'iwu na -anọgide n'ime Chineke, Chineke na -anọgidekwa n'ime ya. Ọ bu kwa nka ka ayi ji mara na Ọ nānọgide nime ayi, site na Mọ Nsọ nke O nyeworo ayi.
(1 John 4: 12-16) Ọ bụrụ na anyị hụrụ ibe anyị n'anya, Chineke na-anọgide n'ime anyị
12 Ọ dighi onye ọ bula huworo Chineke mb ;e ọ bula; ọ bụrụ na anyị hụrụ ibe anyị n'anya, Chineke na -anọgide n'ime anyị, ịhụnanya ya zukwara oke n'ime anyị. 13 Site na nke a ka anyị ji mara na anyị na -anọgide n'ime ya, na ya onwe ya n'ime anyị, n'ihi na o nyere anyị mmụọ ya. 14 Anyị ahụwokwa na -agba ama na Nna zitere Ọkpara ya ka ọ bụrụ Onye nzọpụta nke ụwa. 15 Wonye ọ bụla nke na -ekwupụta na Jizọs bụ Ọkpara Chineke, Chineke na -anọgide n'ime ya, ya onwe ya na Chineke. 16 Ya mere, anyị amatala ma kwere n'ịhụnanya ahụ Chineke nwere n'ebe anyị nọ. Chineke bụ ịhụnanya, na onye ọ bụla nke na -anọgide n'ịhụnanya na -anọgide n'ime Chineke, Chineke na -anọgidekwa n'ime ya.
Ihe ntinye ederede
Edere ozi -ọma Jọn ka unu nwee ike kwere na Jisus bụ Kraịst ahụ, Ọkpara nke Chineke, na site na ikwere, ị ga -enwe ndụ n’aha ya. (Jọn 20:31) Onye ọ bụla nke kwere na Jizọs bụ Kraịst bụ onye Chineke mụrụ, onye ọ bụla nke hụrụ Nna ya n'anya na -ahụkwa onye ọ bụla mụrụ ya n'anya. (1 Jọn 5: 1) Anyị ahụla ma gbaa akaebe na Nna zitere Ọkpara ya ka ọ bụrụ Onye nzọpụta nke ụwa. Onye ọ bula nke g confesskwuputa na Jisus bu Ọkpara Chineke, Chineke nānọgide nime ya, ya onwe -ya nānọgide kwa nime Chineke. (1 Jọn 4: 14-15)
Jọn 20: 30-31 (Mb), ka unu wee kwere na Jizọs bụ Kraịst ahụ, Ọkpara Chineke
30 Ma Jisus mere ọtutu ihe -iriba -ama ọzọ n'iru ndi n disciplesso uzọ -Ya, nke an notdeghi n'akwukwọ a; 31 ma ihe ndị a ka e dere ka unu wee kwere na Jisus bụ Kraịst ahụ, Ọkpara nke Chineke, na site na ikwere na unu ga -enwe ndụ n’aha ya.
(1 John 5: 1) Onye ọ bụla nke kwenyere na Jizọs bụ Kraịst bụ onye Chineke mụrụ
1 Eonye ọ bula nke kwere na Jisus bu Kraist amuwo Chineke, onye ọ bụla nke hụrụ Nna ya n'anya na -ahụkwa onye ọ bụla mụrụ ya n'anya.
1 Jọn 4: 14-15
14 Anyị ahụwokwa na -agba ama na Nna zitere Ọkpara ya ka ọ bụrụ Onye nzọpụta nke ụwa. 15 Onye ọ bula nke g confesskwuputa na Jisus bu Ọkpara Chineke, Chineke nānọgide nime ya, ya onwe -ya nānọgide kwa nime Chineke.
Jizọs kwuru na ya bụ “onye e zitere n’ụwa.” (Jọn 10:36) mana ọ kwukwara mgbe ọ na -ekpe ekpere nye Nna m, "Dịka i zitere m n'ụwa, otu a ka m zitere ha n'ụwa." (Jọn 17:18) Anyị ghọtara na ịbụ onye e zitere n'ime ụwa ka a na-akpọlite ​​dị ka ohu Chineke ma na-eziga ya ije ozi (Ọrụ 3: 22-26).
John 10:36 (ESV), onye Nna ahụ doro nsọ wee zite n'ụwa
36 ị na -ekwu maka onye Nna ya doro nsọ na zitere n'ime ụwa, 'Ị na -ekwulu Chineke,' n'ihi na asị m, 'Abụ m Ọkpara Chineke'?
JỌN 17:18, dika I zigaram nime uwa, Mu onwem ziga -kwa -ra ha nime uwa
18 Dị ka i zitere m n'ụwa, otu ahụ ka m zitere ha n'ime ụwa.
Ọlụ Ndị Ozi 3: 22-26 (NIV), ebe Chineke mere ka ohu ya bilie, buru ụzọ zitere ya ya.
22 Moses wee sị, 'Onye -nwe -anyị Chineke ga -esi n'etiti ụmụnne gị kpọlitere gị onye amụma dịka m. Ị ga -ege ya ntị n'ihe ọ bụla ọ ga -agwa gị. 23 Ọ gēru kwa, na nkpuru-obi ọ bula nke nāgaghi-ege nti onye-amuma ahu, agēbipu ya n'etiti ndi Israel. 24 Ndi-amuma nile ndi nēkwu okwu, site na Samuel na ndi soro ya, kwusara ubọchi ndia. 25 Unu bụ ụmụ ndị amụma na ọgbụgba ndụ nke Chineke na nna nna unu gbara, na -asị Abraham, 'Na mkpụrụ gị ka a ga -agọzi ezinụlọ niile nke ụwa.' 26 Chineke, ebe O mere ka odibo Ya bilie, buru ụzọ zitere Ya Ya, iji gọzie gị site n'ịtụgharị onye ọ bụla n'ime gị n'ajọ omume gị. "
Jizọs kwuru, sị: “Abụghị m nke ụwa.” ( Jọn 8:23, Jọn 10:36 ) ma o kwukwara banyere ụmụazụ ya “unu esiteghị n’ụwa a” ( Jọn 15:19 ) na “ha esiteghị n’ụwa. , dị nnọọ ka m na-abụghị nke ụwa.” ( Jọn 17:14 ) Mgbe ọ na-ekpegara Nna m ekpere.
(Jọn 8:23) Abụghị m nke ụwa a
Ọ si ha, Unu onwe -unu sitere n'okpuru; Esi m n'elu. Unu bụ nke ụwa a; Esighi m n'uwa nka.
(Jọn 17:14) Ha abụghị nke ụwa, dị nnọọ ka m na -abụghị nke ụwa
Enyewo m ha okwu gị, ụwa akpọwokwa ha asị n'ihi na ha esiteghi n'uwa, dika Mu onwem n notsiteghi n'uwa.
Jọn 15:19 (Mb), Unu esiteghị n'ụwa - ya mere ụwa kpọrọ unu asị
A sị na unu bụ nke ụwa, ụwa ga -ahụ unu n'anya dị ka nke ya; mana n'ihi unu esiteghi n'uwa, mana ahọpụtara m gị n'ụwa, yabụ ụwa kpọrọ gị asị.
Pọl dere, "n'ime ya ka njupụta nke Chineke dịịrị ibi n'ime ya" (Ndị Kọlọsi 1:19) na "n'ime ya ka njupụta niile nke chi bi n'ime anụ ahụ" (Ndị Kọlọsi 2: 9). Mana Pọl dekwara na ya hulatara ikpere ya n'ihu Nna (n'ekpere) ka, "ka akụ nke ebube ya si dị, ka o nye gị ike site n'ike mmụọ nsọ ya n'ime ime gị" (Ndị Efesọs 3:16) na "Ịmara ịhụnanya nke Kraịst nke karịrị ihe ọmụma, ka e wee jupụta gị n'uju niile nke Chineke." (Ndị Efesọs 3:19)
Ndị Kọlọsi 1:19 (NIV), n'ime ya ka izu oke niile nke Chineke dị
19 n'ihi na nime ya ka afọ ojuju niile nke Chineke siri dị, 20 na site n'aka ya ka ya na ihe niile dịghachi ná mma, ma n'elu ụwa ma ọ bụ n'eluigwe, na -eme udo site n'ọbara nke obe ya.
Ndị Kọlọsi 2: 9-10 (ESV), n'ime ya ka njupụta niile nke chi bi n'ime anụ ahụ
9 n'ihi na n'ime ya ka njupụta niile nke chi bi n'ime anụ ahụ, 10 i jupụtakwara n'ime ya, onye bụ isi nke ọchịchị niile na ikike niile.
Ndị Efesọs 3: 14,16,19, XNUMX, XNUMX (ESV), ka unu wee jupụta na uju niile nke Chineke
14 N'ihi nke a ka m na -egbu ikpere m n'ihu Nna ... 16 ka o wee nye unu ike site na Mmụọ ya n'ime ime unu dịka akụ nke ebube ya si dị ...19 na ịmara ịhụnanya nke Kraịst nke karịrị ihe ọmụma, ka unu wee jupụta na uju niile nke Chineke.
Pọl zoro aka na “ozioma nke ebube Kraịst, onye bụ onyinyo Chineke.” (Gụọ 2 Ndị Kọrịnt 4: 3-6.) Pọl kwukwara na Jizọs bụ “onyinyo nke Chineke a na -apụghị ịhụ anya, onye e buru ụzọ mụọ n’ime ihe niile e kere eke.” (Ndị Kọlọsi 1:15) Okwu gbara amaokwu ndị a metụtara ozioma nke Nna 'mere ka i tozuo oke iketa oke n'ihe nketa ndị nsọ n'ìhè' nke Nna si n'aka ya 'bufee anyị n'alaeze nke Ọkpara ya ọ hụrụ n'anya. ” (Kọl 1: 12-15) Oziọma ahụ si otú a na-enye ụzọ anyị ga-esi gosi ya “dị nsọ na-enweghị ụta, bụrụkwa onye a na-akọcha n'ihu ya.” (Ndị Kọlọsi 1: 21-22) Pọl mechara kwuo na Ndị Kọlọsi, “Mgbe Kraịst onye bụ ndụ gị pụtara, mgbe ahụ ị ga-esokwa ya pụta ihe n'ebube” wee sị “yikwasịkwa ụdị mmadụ ọhụrụ ahụ nke a na-eme ka ọ dị ọhụrụ n'ihe ọmụma. foto nke onye kere ya. ” (Kọl 3: 1-10) N’ezie, Chineke buru ụzọ kpebie ka anyị “mee ka oyiyi Ọkpara ya dị, ka o wee bụrụ onye mbụ n’etiti ọtụtụ ụmụnna” na “ndị ọ gụrụ n’onye ahụ ka o nyekwara otuto.” (Ndị Rom 8: 29-30) "Dị ka onye nke eluigwe dị, otu ahụkwa ka ndị nke eluigwe dị - dịka anyị siri were onyinyo nke onye aja, anyị ga -eburukwa onyinyo nke onye nke eluigwe." (1 Ndị Kọrịnt 15: 48-49) "Anyị niile na-ekpuchi ihu, na-ahụ ebube nke Onyenwe anyị, a na-agbanwe anyị ka anyị bụrụ otu onyinyo ahụ site n'otu ogo ruo n'ọkwa ọzọ." (2 Ndị Kọrịnt 3: 17-18) Amaokwu ndị a na-ekpughere anyị na "ozioma nke ebube Kraịst" bụ ozi ọma nke anyị nwere ike gbapụta wee gbanwee n'otu onyinyo nke Kraịst, onye e buliri elu ma bụrụkwa onyinyo nke Chukwu. (1 Ndị Kọrịnt 4: 3-6, Kọl 1: 12-15)
2 Ndị Kọrịnt 4: 3-6 (ESV), otuto nke Kraịst, onye bụ onyinyo Chineke
3 Ọ bụrụgodi na oziọma anyị bụ ihe mkpuchi, ọ na -ekpuchi ndị na -ala n'iyi. 4 N'ọnọdụ ha, chi nke ụwa a emeela ka uche ndị na -ekweghị ekwe kpuo ìsì, ka ọ ghara ịhụ ìhè nke Chineke ozioma nke ebube nke Kraist, onye bu onyinyo Chineke. 5 N’ihi na ihe anyị na-ezisa abụghị onwe anyị, kama Jizọs Kraịst dị ka Onyenwe anyị, anyị onwe anyị bụ ndị ohu gị n’ihi Jizọs. 6 N'ihi na Chineke, onye sịrị, "Ka ìhè si n'ọchịchịrị nwupụta," enwuwo n'obi anyị inye ìhè nke ihe ọmụma nke ebube nke Chineke n'ihu Jizọs Kraịst.
Ndị Kọlọsi 1: 12-15 (ESV), Ọ bụ onyinyo nke Chineke a na-apụghị ịhụ anya
12 na -ekele Nna, onye tozuru oke ka ị keta oke n'ihe nketa nke ndị nsọ n'ìhè. 13 Ọ napụtala anyị n'ọchịchịrị na bufere anyị n'alaeze nke Ọkpara ya ọ hụrụ n'anya, 14 Onye anyị nwere mgbapụta n'ime Ya, bụ mgbaghara mmehie. 15 Ọ bụ onyinyo nke Chineke a na -apụghị ịhụ anya, onye e buru ụzọ mụọ n'ime ihe niile e kere eke.
Ndị Kọlọsi 1: 21-22 (IGBOB), ka m wee nye unu nsọ na onye zuru oke na onye enweghị nkọcha
21 Unu onwe -unu kwa, ndi buru ndi -ọbìa na ndi -iro n'obi, n doingme ihe ọjọ, 22 ugbu a, o meela ka ya na anụ ahụ ya dị ná mma site n'ọnwụ ya, iji gosi gị dị nsọ na -enweghị ụta na karịa nkọcha n'ihu ya
Ndị Kọlọsi 3: 1-10 (ESV), ị ga-eso ya pụta ihe n'ebube- yikwasị ụdị mmadụ ọhụrụ ahụ- na-eme ka ọ dị ọhụrụ dị ka onyinyo nke onye kere ya si dị.
1 Ya mere oburu na emere ka gi na Kraist si n'onwu bilie, choo ihe di n'elu, ebe Kraist no, ka o noro n'aka nri nke Chineke. 2 Tụkwasịnụ uche n'ihe ndị dị n'elu, ọ bụghị n'ihe ndị dị n'elu ụwa. 3 N'ihi na unu anwụọla, e zokwara ndụ gị na Kraịst n'ime Chineke. 4 Mgbe Kraịst onye bụ ndụ gị pụtara, mgbe ahụ gị onwe gị ga -esokwa ya pụta n'ebube. 5 Ya mere, me ka ihe nke ụwa dị n'ime unu nwụọ: ịkwa iko, adịghị ọcha, agụụ mmekọahụ, ọchịchọ ọjọọ, na anyaukwu, nke bụ ikpere arụsị. 6 Ọ bụ n'ihi ihe ndị a ka ọnụma Chineke ji abịa. 7 N'ime ihe ndị a, gị onwe gị jegharịrị otu ugboro, mgbe ị bi na ha. 8 Ma ugbu a, ị ga -ewepụ ha niile: iwe, iwe, echiche ọjọọ, nkwutọ, na okwu rụrụ arụ n'ọnụ gị. 9 Unu agharala ibe unu ụgha, ebe unu wepụrụ mmadụ ochie ahụ na omume ya 10 ma nwee yikwasị onwe ọhụrụ, nke a na -eme ka ọ dị ọhụrụ na ihe ọmụma mgbe oyiyi onye kere ya.
Ndị Rom 8: 29-30 (ESV), Ọ kara aka na ya ga-eme ka oyiyi Ọkpara ya dị
29 Maka ndị ọ buru ụzọ mara, ọ bụkwa ya nke akara aka ka o kwekọọ onyinyo nke Ọkpara ya, ka o wee bụrụ ọkpara n'etiti ọtụtụ ụmụnne. 30 Ma ndị ahụ ọ kara aka, ọ kpọkwara ha, ndị ọ kpọkwara, ndị ahụ ka ọ bụkwa ndị ezi omume; ndị ọ gụrụ n'onye ahụ ka o nyekwara otuto.
1 Ndị Kọrịnt 15: 48-49 (ESV), Anyị ga-eyirikwa onyinyo nke onye nke eluigwe
48 Dị ka onye ahụ sitere n'ájá, otú ahụkwa ka ndị sitere n'ájá dị, dika madu nke elu -igwe si di, otú a ka ndi elu -igwe di kwa. 49 Dị nnọọ ka anyị buliri onyinyo nke onye ájá, ayi g bearyi kwa onyinyo nke madu nke elu -igwe.
2 Ndị Kọrịnt 3: 17-18 (ESV), a na-agbanwe anyị ka anyị yie otu onyinyo ahụ
17 Ma Onye-nwe-ayi bu Mọ ahu, ma ebe Mọ nke Onye-nwe-ayi di, nnwere onwe di. 18 Na anyị niile, na -ekpuchi ihu, na -ahụ ebube nke Onyenwe anyị, a na -agbanwe ya ka ọ bụrụ otu onyinyo ahụ site n'otu ogo ruo n'ọzọ. N'ihi na nke a sitere n'aka Onyenwe anyị bụ Mmụọ.
Jizọs sịrị: “Ọ bụrụ na m enye onwe m otuto, ebube m abụghị ihe ọ bụla. Ọ bụ Nna m na-enye m otuto, onye unu na-ekwu banyere ya, sị, ‘Ọ bụ Chineke anyị,’” ( Jọn 8:54 ) Ọ jụkwara Nna m, sị: “Nye m otuto n’ihu gị n’otuto ahụ m nwere n’ebe unu nọ tupu mgbe ahụ. ụwa dị.” ( Jọn 17:5 ) Otú ọ dị, Jizọs kpegaara Chineke ekpere, sị: “Enyewokwa ha otuto ahụ i nyeworo m, ka ha wee bụrụ otu ọbụna dị ka anyị bụ otu.” ( Jọn 17:22 ) “ka ụwa wee bụrụ otu. ka ị mara na ị hụrụ ha n’anya ọbụna dị ka ị hụrụ m n’anya.” (Jọn 17:23) Ahụhụ nke oge dị ugbu a abaghị uru iji tụnyere ebube nke a ga-ekpughere anyị - mkpughe nke ụmụ Chineke (Ndị Rom 8: 18-19). Ihe nzuzo na amamihe ezoro ezo nke Chineke bụ ihe Chineke kpebiri tupu oge dị iche iche maka otuto anyị (1 Ndị Kọrịnt 2:6-7). Ndị ahụ a ga-azọpụta bụ arịa ebere, nke Chineke kwadebere tupu oge eruo maka otuto (Ndị Rom 9:22-24). Mgbe Kraist bu ndu ayi gaputa, mgbe ahu ayi na ya gabu kwa n'ebube (Kol 3:4). Nime Kraist ayi enwetawo ihe-nketa dika ebum n'obi Chineke si di ka oge zuru ezu (Ef 1:11). Ekère ayi nime Kraist Jisus ime ezi ọlu nke Chineke buru uzọ dozie, ka ayi we nējeghari nime ha. (Ndị Efesọs 2:10) Ụdị amamihe dị iche iche nke Chineke bụ atumatu ihe omimi nke ezoro ezo ruo mgbe ebighị ebi n’ime Chineke dị ka ebumnobi ebighị ebi ahụ nke o meworo n’ime Kraịst Jisọs Onyenwe anyị (Ndị Efesọs 3:9-11).
John 8:54 (NIV), Ọ bụ Nna m na -enye m otuto
Jisus zara, si,Ọ bụrụ na m na -enye onwe m otuto, otuto m abụghị ihe ọ bụla. Ọ bụ Nna m na -enye m otuto, onye ị na -ekwu maka ya, 'Ọ bụ Chineke anyị. '
John 17: 1-5 (ESV), were ebube ahụ mụ na gị nwere tupu ụwa adị
1 Mgbe Jizọs kwuchara okwu ndị a, o welie anya ya lee eluigwe, sị, “Nna, Nna! oge awa abịawo; nye Ọkpara gị otuto ka Ọkpara ahụ wee nye gị otuto, 2 ebe I nyere ya ikike n'ebe anụ ahụ niile nọ, inye ndị niile I nyere ya ndụ ebighi ebi. 3 Ma nka bu ndu ebighi -ebi, ka ha mara Gi, Nke nání Gi bu ezi Chineke, mara kwa Onye I zitere, bú Jisus Kraist. 4 Ana m enye gị otuto n'ụwa, ebe m rụchara ọrụ ahụ i nyere m ka m rụọ. 5 Ma ugbu a, Nna, jiri ebube m nwere n'ebe ị nọ tupu ụwa amalite ịdị nye m otuto n'ihu gị.
(Jọn 17: 22-23) Otuto ahụ i nyere m ka m nyere ha
22 Ebube nke I nyewo m ka m nyeworo ha, ka ha wee bụrụ otu dị ka anyị bụ otu, 23 Anọ m n'ime ha, gị onwe gị n'ime m, ka ha wee bụrụ otu, ka ụwa wee mara na ọ bụ gị zitere m hụkwara ha n'anya ọbụna dị ka ị hụrụ m n'anya.
Ndị Rom 8: 18-21
18 N'ihi na echere m na ahụhụ nke oge ugbu a ekwesịghị ka atụnyere ya ebube nke a ga -ekpughe nye anyị. 19 N'ihi na ihe okike na -echesi ike mkpughe nke ụmụ Chineke. 20 N'ihi na edobere ihe e kere eke ịbụ ihe efu, ọ bụghị site n'ọchịchọ ya, kama n'ihi onye doro ya. n'olileanya 21 na ihe e kere eke n'onwe ya ga -enwere onwe ya pụọ ​​n'agbụ nke ire ure na nweta nnwere onwe nke ebube nke ụmụ Chineke.
1 Ndị Kọrịnt 2: 6-7 (NIV), amamihe nke Chineke nyere iwu tupu afọ niile maka ebube anyị
6 Ma n'etiti ndị tozuru oke anyị na -enye amamihe, n'agbanyeghị na ọ bụghị amamihe nke oge a ma ọ bụ nke ndị ọchịchị nke oge a, ndị ga -anwụ. 7 Ma anyị na -enye amamihe Chineke nke zoro ezo na nke zoro ezo, nke Chineke nyere iwu tupu afọ niile maka ebube anyị.
Ndị Rom 9: 22-24 (ESV), arịa nke ebere, nke o buru ụzọ kwadebe maka otuto
22 Gịnị ma ọ bụrụ na Chineke chọrọ igosi iwe ya na ime ka a mara ike ya, were ntachi obi dị ukwuu die arịa iwe nke edoziri maka mbibi, 23 ka ewere ka eme ka amara àkù nke ebube -ya bayere ihe nile nke ebere, nke o doziworo na mbu ibu otuto- 24 ọbuná ayi onwe -ayi, bú ndi Ọ kpọworo, ọ bughi nání ndi -Ju kama kama site kwa na ndi mba ọzọ.
Ndị Kọlọsi 3: 1-4 (ESV), gị na ya ga-apụtakwa n'ebube
1 Ọ bụrụ mgbe ahụ a kpọlitere gị na Kraịst, chọọnụ ihe dị n'elu, ebe Kraist nọ, nānọdu n'aka -nri Chineke. 2 Tụkwasịnụ uche n'ihe ndị dị n'elu, ọ bụghị n'ihe ndị dị n'elu ụwa. 3 N'ihi na unu anwụọla, e zokwara ndụ gị na Kraịst n'ime Chineke. 4 Mgbe Kraịst onye bụ ndụ gị pụtara, mgbe ahụ gị onwe gị ga -esokwa ya pụta n'ebube.
Ndị Efesọs 1: 9-11 (ESV), n'ime ya ka anyị nwetara ihe nketa
9 na -eme ka anyị mara ihe omimi nke uche ya, dị ka nzube ya si dị, nke o setịpụrụ n'ime Kraịst 10 dị ka atụmatụ maka oge zuru oke, ijikọ ihe niile n'ime ya, ihe dị n'eluigwe na ihe dị n'ụwa. 11 N'ime ya ka anyị nwetara ihe nketaebe e buru ụzọ kaa akara dịka ebumnuche nke onye na -eme ihe niile si dị dịka ndụmọdụ nke ọchịchọ ya si dị,
Ndị Efesọs 2: 10 (ESV), Anyị bụ ọrụ aka ya, ekepụtara n'ime Kraịst Jizọs
10 "N'ihi na anyị bụ aka ọrụ ya, ekepụtara anyị n'ime Kraịst Jizọs maka ezi ọrụ, nke Chineke kwadebere na mbụ, na anyị ga -eje ije n'ime ha. "
Ndị Efesọs 3: 9-11 (ESV), site na ụka, a ga-eme ka amara ọtụtụ amamihe nke Chineke ugbu a
9 na ikpughe nye onye ọ bụla ihe bụ atụmatụ nke ihe omimi zoro ezo ruo ọtụtụ afọ n'ime ChinekeOnye kere ihe niile, 10 so ka ewe site na nzukọ Kraist me ka amara amara bayere Chineke nke nāba uba ọnọ mme andikara ye mme andikara ke mme heaven. 11 Nke a bụ dịka ebumnuche ebighi ebi nke o mezuru na Kraịst Jizọs Onyenwe anyị
Jizọs kpere ekpere, "Nna, achọrọ m ka ha, ndị ị nyere m, ka mụ na ha nọrọ ebe m nọ, ka ha wee hụ ebube m nke i nyere m n'ihi na ị hụrụ m n'anya tupu a tọọ ntọala ụwa." (Jọn 17:24). Ọ na -asịkwa, “Bịa, unu ndị Nna m gọziri agọzi, ketanụ alaeze akwadoro gị site na ntọala nke ụwa.” (Mt 25:34) Chineke ekebeghị anyị maka iwe, kama ka anyị wee nata nkuchi dị ka ụmụ (1Tes 5: 9-10, Gal 4: 4-5). Ọ dịghị anya hụrụ, ma ọ bụ ntị anụbeghị, ma ọ bụ obi mmadụ chere, ihe Chineke kwadebere maka ndị hụrụ ya n'anya. (1 Ndị Kọrịnt 2: 7-9) Ihe niile na-arụrụ ndị hụrụ Chineke n'anya na ndị akpọrọ dịka ebumnuche ya (Ndị Rom 8: 28-29, Ndị Efesọs 1: 3-5). Chineke zọpụtara anyị wee kpọọ anyị oku dị nsọ n'ihi ebumnuche na amara nke o nyere anyị n'ime Kraịst Jizọs tupu afọ amalite (2 Tim 1: 8-10). Ebu ụzọ mara Jizọs tupu a tọọ ntọala ụwa mana emere ka ọ pụta ìhè n'oge ikpeazụ maka anyị (1 Pita 1:20). Ndị nsọ bụ ndị edere aha ha n'akwụkwọ nke ndụ nke Nwa atụrụ ahụ e gburu site na ntọala nke ụwa (Nkpughe 13: 5-8).
John 17: 22-26 (Ị) hụrụ m n'anya tupu a tọọ ntọala ụwa
22 Enyewo m ha otuto ahụ i nyere m, ka ha wee bụrụ otu dị ka anyị bụ otu, 23 M n'ime ha na gị n'ime m, ka ha wee bụrụ otu zuru oke, ka uwa we mara na Gi onwe -gi ziterem, na I hu -kwa -ra ha n'anya dika I hurum n'anya. 24 Nna, anamachọ ka, ndi I nyeworom, ka Mu na ha nọ kwa, ebe Mu onwem nọ, ihu ebube nke I nyeworom, n'ihi na I hurum n'anya mb thee akātọghi ntọ -ala uwa.. 25 Nna nke bụ onye ezi omume, n'agbanyeghị na ụwa amaghị gị, ama m gị, ndị a makwaara na ọ bụ gị zitere m. 26 Emere m ka ha mara aha gị, m ga -emekwa ka a mara ya, ka ihu -n'anya nke I ji hum we di nime ha, Mu onwem kwa nime ha. "
Matiu 25:34 (Mb), ketanụ alaeze a kwadebeere unu site na ntọala nke ụwa
34 Mgbe ahụ, Eze ahụ ga -asị ndị nọ n'aka nri ya, 'Bịa, unu ndị Nna m gọziri, ketanụ alaeze akwadoro gị site na ntọala nke ụwa.
1 Ndị Tesalonaịka 5: 9-10 (Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ), Chineke kara aka na anyị ga-enweta nzọpụta site n'aka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst
“N'ihi Chineke ekeghị anyị maka iwe, kama ka anyị nweta nzọpụta site n'aka Onyenwe anyị Jizọs Christ, onye nwụrụ n'ihi anyị ka anyị wee mara ma anyị nọ n'ụra anyị nwere ike ịnọnyere ya. "
Ndị Galetia 4: 4-5 (NIV), ka anyị wee nata nnabata dị ka ụmụ
4 Ma mgbe oge zuru oke mechara, Chineke zitere Ọkpara ya, nke nwanyị mụrụ, amụrụ n'okpuru iwu, 5 iji gbapụta ndị nọ n'okpuru iwu, ka anyị wee nata nkuchi dị ka ụmụ.
1 Ndị Kọrịnt 2: 7-9 (ESV), Ọ dịghị obi mmadụ chere, ihe Chineke kwadebere maka ndị hụrụ ya n'anya
7 Ma anyị na -enye amamihe Chineke nke zoro ezo na nke zoro ezo, nke Chineke nyere iwu tupu afọ niile maka ebube anyị. 8 Ọ dịghị onye ọ bụla n'ime ndị ọchịchị nke oge a ghọtara nke a, n'ihi na ọ bụrụ na ha ghọtara ya, ha agaraghị akpọgide Onyenwe ebube. 9 Ma, dị ka e dere, "Ihe anya adịghị ahụ, nke ntị na -anụbeghị, ma ọ bụ obi mmadụ chere, ihe Chineke kwadebere maka ndị hụrụ ya n'anya"
(Ndị Rom 8: 28-29) Anyị maara na maka ndị hụrụ Chineke n'anya ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ọdịmma
"Ma anyị maara na maka ndị hụrụ Chineke n'anya ihe niile na -arụkọ ọrụ ọnụ maka ọdịmma, maka ndị akpọrọ dịka nzube ya. Maka ndị ọ buru ụzọ mara, o burukwa ụzọ kpebie ka ha kwekọọ n'oyiyi nke Ọkpara ya, ka o wee bụrụ ọkpara n'etiti ọtụtụ ụmụnne.
Ndị Efesọs 1: 3-5 (ESV), n'ịhụnanya ka o buru ụzọ kpebie ka anyị doo onwe ya dịka ụmụ site n'aka Jizọs Kraịst
“Onye a gọziri agọzi ka ọ bụ bụ Chineke na Nna nke Onyenwe anyị Jisọs Kraịst, onye jiri ngọzi ime mmụọ ọ bụla gọzie anyị n'ime Kraịst, dịka ọ họọrọ anyị n'ime ya tupu a tọọ ntọala ụwa, ka anyị wee dị nsọ na -enweghị ụta n'ihu ya. N'ịhụnanya ọ kara aka ka anyị were dị ka ụmụ site n'aka Jizọs Kraịst, dika nzube nke uche ya si di. "
2 Timoti 1: 8-10 (NIV) Amara, nke o nyere anyị n'ime Kraịst Jizọs tupu afọ amalite
"Chineke onye zọpụtara anyị wee kpọọ anyị oku dị nsọ, ọ bụghị n'ihi ọrụ anyị kama n'ihi nzube na amara nke onwe ya, nke O nyere anyị n'ime Kraịst Jizọs tupu afọ amalite, nke e gosipụtala ugbu a site na mpụta nke Onye Nzọpụta anyị Kraịst Jizọs. ”
(1 Pita 1:20) Ebu ụzọ mara ya, mana emere ka ọ pụta ìhè n'oge ikpeazụ maka gị
Ebu ụzọ mara ya tupu a tọọ ntọala ụwa mana emere ka ọ pụta ìhè n'oge ikpeazụ n'ihi gị.
Mkpughe 13: 5-8 (Nwa Mbilite n'ọnwụ), Nwa atụrụ ahụ e gburu site na ntọala nke ụwa
5 Ewe nye ya ọnu nke n speakingkwu oké ihe na nkwulu; ewe nye ya ike ka ọ nọgide ọnwa iri anọ na abụọ. 6 O we saghe ọnu -ya ikwulu Chineke, ikwulu aha -Ya, na ebe -obibi -Ya, na ndi bi n'elu -igwe. 7 Ewe nye ya ike ibu agha megide ndi nsọ, na imeri ha: e nyekwara ya ikike ịchị agbụrụ niile na asụsụ niile na mba niile. 8 Na ndị niile bi n'elu ụwa ga -akpọ isiala nye ya, onye edeghị aha ha n'akwụkwọ nke ndụ nke Nwa atụrụ ahụ e gburu site na ntọala nke ụwa.
“E kpọsaa Jizọs bụ Ọkpara Chineke n’ike dị ka mmụọ nsọ nke ịdị nsọ si dị site ná mbilite n’ọnwụ ya site ná ndị nwụrụ anwụ. (Rom 1: 4, Ọrụ 13: 32-35) Jizọs kwuru banyere alaeze na-abịanụ, "ma ndị a na-ewere na ndị ruru eru irute n'oge ahụ na ná mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ ... hà nhata na ndị mmụọ ozi, bụrụkwa ụmụ Chineke. , ịbụ ụmụ mbilite n’ọnwụ.” ( Luk 20:35-36 ) Ihe e kere eke na-echere mkpughe nke ụmụ Chineke, anyị na-asụkwa ude n’ime ka anyị ji ịnụ ọkụ n’obi na-echere nkuchi dị ka ụmụ, ihe mgbapụta nke ahụ́ anyị. (Rom 8: 18-23, Rt 9: 22-26, Efe 1: 3-5) Dị ka nzube Chineke si dị, o buru ụzọ kpebie ịbụ onye mbụ bụụrụ anyị ihe ọkpara n'etiti ụmụnne nwoke. (Ndị Rom 8:28-29)
Luke 20: 34-36 (ESV), ụmụ Chineke, ebe ha bụ ụmụ mbilite n'ọnwụ
34 Jisus we si ha, Umu -ndikom nke oge a luru nwunye, ewe nye ha n'ọlụlụ nwunye. 35 ma ndị ahụ e lere anya dị ka ndị ruru eru ruo afọ ahụ na mbilite n'ọnwụ site na ndị nwụrụ anwụ alụla di ma ọ bụ nwunye, 36 n'ihi na ha enweghị ike ịnwụ anwụ ọzọ, n'ihi na ha na ndị mmụọ ozi hà bụ ụmụ Chineke, ebe ha bụ ụmụ nke mbilite n'ọnwụ.
Ọrụ Ndị Ozi 13: 32-35, ozi ọma-O mezuola anyị site n'ịkpọlite ​​Jizọs
32 Anyị na -ezikwa unu ozi ọma nke Chineke kwere ndị nna nna, 33 a o mezuola anyị ụmụ ha site n'ịkpọlite ​​Jizọs, dịka e dekwara ya n'Abụ Ọma nke abụọ, “'Ị bụ Ọkpara m, taa amụọla m gị. ' 34 Na maka eziokwu na ọ kpọlitere ya n'ọnwụ. 35 Ya mere ọ na -ekwukwa n'abụ ọma ọzọ, sị, 'Ị gaghị ekwe ka Onye Nsọ gị hụ ire ure.'
Ndị Rom 1: 1-4 (ESV), ekwuputara na ọ bụ Ọkpara Chineke n'ike-site na mbilite n'ọnwụ ya site na ndị nwụrụ anwụ
Na1 Pọl, onye n servantjere Kraist Jisus ozi, onye akpọrọ ibu onye -ozi, onye edoro nsọ nye ozi ọma Chineke, 2 nke o buru uzọ kwe nkwa site na ndi -amuma -Ya n'akwukwọ nsọ, 3 gbasara Ọkpara ya, onye sitere na Devid dị ka anụ ahụ si dị 4 e kwupụtakwara na ọ bụ Ọkpara Chineke n'ike dị ka Mmụọ nke ịdị nsọ site na mbilite n'ọnwụ ya site na ndị nwụrụ anwụ, Jizọs Kraịst Onyenwe anyị
Ndị Rom 8: 18-23 (ESV), Okike na-atụsi anya ike maka mkpughe nke ụmụ Chineke
18 N'ihi na echere m na ahụhụ nke oge ugbu a ekwesịghị ka atụnyere ya otuto nke ahụ ka a ga -ekpughere anyị. 19 N'ihi na ihe e kere eke na -echesi ike maka mkpughe nke ụmụ Chineke. 20 N'ihi na e doro ihe e kere eke ịbụ ihe efu, ọ bụghị ọchịchọ ya, kama n'ihi onye doro ya, ka o nwee olileanya 21 na ihe okike n'onwe ya ga -enwere onwe ya pụọ ​​n'agbụ mmebi ya wee nweta nnwere onwe nke ebube nke ụmụ Chineke. 22 N'ihi na anyị matara na ihe niile e kere eke nọ na-asụkọ ude na ime na-amụ nwa ruo ugbu a. 23 Ma obughi nani okike, ma anyị onwe anyị, ndị nwere mkpụrụ mbụ nke mmụọ nsọ, na -asụ ude n'ime anyị ka anyị na -echesi ike maka idobe dị ka ụmụ, mgbapụta nke ahụ anyị..
Ndị Rom 8: 28-29 (ESV), ka ọ bụrụ ọkpara n'etiti ọtụtụ ụmụnne
28 Anyị makwa na ihe niile na -arụkọ ọrụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya maka ọdịmma, maka ndị akpọrọ dịka ebumnuche ya si dị. 29 n'ihi na ndị ọ buru ụzọ mata na o burukwa ụzọ kpebie ka ha kwekọọ n'oyiyi nke Ọkpara ya, ka o wee bụrụ ọkpara n'etiti ọtụtụ ụmụnne..
Ndị Rom 9: 22-26 (ESV), a ga-akpọ ha 'ụmụ nke Chineke dị ndụ'
22 Gịnị ma ọ bụrụ na Chineke chọrọ igosi iwe ya na ime ka a mara ike ya, were ntachi obi dị ukwuu die arịa iwe nke edoziri maka mbibi, 23 ka o wee mee ka a mara akụ nke ebube ya maka arịa ebere, nke o buru ụzọ kwadebe maka otuto- 24 ọbuná ayi onwe -ayi, bú ndi Ọ kpọworo, ọ bughi nání ndi -Ju kama kama site kwa na ndi mba ọzọ. 25 Dị ka ọ na -ekwu n'ezie na Hosea, “Ndị na -abụghị ndị m ka m ga -akpọ 'ndị m,' nke m na -ahụghị n'anya ka m ga -akpọ 'onye m hụrụ n'anya'. 26 “Na kpọmkwem ebe a sịrị ha, 'Unu abụghị ndị m.' n'ebe ahu ka agākpọ ha 'umu nke Chineke di ndu.'"
Ndị Efesọs 1: 3-5 (ESV), n'ịhụnanya ka o buru ụzọ kpebie anyị ka anyị bụrụ nwa ya
3 Onye a gọziri agọzi ka ọ bụ bụ Chineke na Nna nke Onyenwe anyị Jisọs Kraịst, onye jiri ngọzi ime mmụọ ọ bụla gọzie anyị n'ime Kraịst n'ime eluigwe, 4 dika Ọ rọputara ayi nime Ya tutu eme ntọ -ala uwa, ka ayi we di nsọ buru kwa ndi zuru okè n'iru Ya. N'ịhụnanya 5 o burula ụzọ kaa anyị ka anyị bụrụ nwa ya site n'aka Jizọs Kraịst, dị ka nzube nke uche ya si dị
Jizọs weere onwe ya dị ka Ọkpara Chineke. N’Iwu ahụ, a kpọrọ ha chi ndị okwu Chineke bịakwutere ha. (Jọn 10:35-36). Naanị ihe Jizọs na-ekwu bụ na ya bụ Ọkpara Chineke n’agbanyeghị na Nna ya zitere ya n’ụwa ma na-arụ ọrụ Nna ya. (Jọn 10:37) N’otu aka ahụ, ọ na-ekwu n’akwụkwọ ndị Rom, sị: “Ndị nile mmụọ Chineke na-edu bụ ụmụ Chineke… unu anatawokwa Mmụọ nke e doro dị ka ụmụ, onye anyị na-eti mkpu, sị: “Aba! Nna!” (Ndị Rom 8:14-15) na Mmụọ Nsọ “na-esokwa mmụọ anyị na-agba àmà na anyị bụ ụmụ Chineke, ọ bụrụkwa na anyị bụ ụmụ, e mesịa, anyị bụ ndị nketa—ndị nketa nke Chineke na ndị ha na Kraịst na-eketakọ ihe.” (Ndị Rom 8:16-17). "Anyị maara na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya, maka ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị." (Rom 8:28) N'ihi na ndị o buru amụma banyere ihe oyiyi Ọkpara ya, ka ọ ga-abụ nwa ọhụrụ n'etiti ọtụtụ ụmụnna. " (Ndị Rom 8:29)
(Luk 3: 21-22) Ị bụ Ọkpara m nke m hụrụ n'anya; na gị enwere m obi ụtọ
21 Ma mb whene emere madu nile baptism, mb ande eme-kwa-ra Jisus baptism, n waskpe ekpere, elu-igwe meghere, 22 na Mmụọ Nsọ dakwasịrị ya n'anụ ahụ, dị ka nduru; olu wee si n'eluigwe kwuo, "Ị bụ Ọkpara m hụrụ n'anya; ihe gị masịrị m. ”
Ndị Rom 8: 14-17 (ESV), Ndị niile mmụọ Chineke na-edu bụ ụmụ Chineke
14 N'ihi na ndị niile mmụọ Chineke na -edu bụ ụmụ Chineke. 15 N'ihi na unu anataghị mmụọ nke ịbụ ohu ka unu wee malite ịtụ egwu ọzọ, kama unu anatala mmụọ nke ido dị ka ụmụ, onye anyị na -etiku ya, “Aba! Nna! " 16 Mmụọ nsọ n'onwe ya so mmụọ anyị na -agba àmà na anyi bu umu Chukwu, 17 ọ bụrụkwa ụmụaka, mgbe ahụ, ndị nketa—Ndị nketa Chineke na ndị nketa Kraịst.
Ndị Rom 8: 22-23 (ESV), anyị bụ ndị nwere mkpụrụ mbụ nke mmụọ nsọ-na-echesi ike maka nkuchi dị ka ụmụ
22 N'ihi na anyị matara na ihe niile e kere eke nọ na-asụkọ ude na ime na-amụ nwa ruo ugbu a. 23 Ma obughi nani okike, ma anyị onwe anyị, ndị nwere mkpụrụ mbụ nke mmụọ nsọ, na -asụ ude n'ime anyị ka anyị na -echesi ike maka nkuchi, mgbapụta nke ahụ anyị.
2 Ndị Kọrịnt 1: 21-22 (Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ), Chineke enyela anyị mmụọ ya n'ime obi anyị ka ọ bụrụ ihe nkwa
21 Ọ bụkwa Chineke na -eme ka anyị na unu guzosie ike n'ime Kraịst, teekwa anyị mmanụ, 22 Onye kwa -kwa -ra ayi akàrà -ya, nye kwa ayi Mọ -Ya n'obi -ayi, ka ọ buru ihe -àmà.
(2 Ndị Kọrịnt 5: 1-5) Ka ndụ we loda ihe na-anwụ anwụ, Chineke enyela anyị mmụọ ka ọ bụrụ ihe ga-eme ka ọ dị ndụ.
1 N'ihi na anyị maara na ọ bụrụ na ebibi ụlọikwuu ahụ, nke bụ ụwa anyị, anyị nwere ụlọ nke sitere na Chineke, ụlọ ejighị aka mee, ebighi ebi n'eluigwe. 2 N'ihi na anyị na -asụ ude n'ime ụlọ ntu a, na -atụ anya iyiri ebe obibi anyị nke eluigwe, 3 ọ bụrụ n'ezie na site n'iyiri ya, a gaghị ahụ anyị ka anyị gba ọtọ. 4 N'ihi na mgbe anyị ka nọ n'ụlọ ntu a, anyị na -asụ ude, na -anyịgbu anyị, ọ bụghị na a ga -eyipụ anyị uwe, kama ka ayi yikwasi kwa uwe ọzọ, ka ndu we loda ihe nānwu anwu. 5 Onye kwadebere anyị maka ihe a bụ Chineke, onye nyere anyị Mmụọ nsọ.
Ndị Galetia 4: 4-7 (BV), Bn'ihi na unu bụ ụmụ, Chineke ezitela mmụọ nke Ọkpara ya n'ime obi anyị
4 Ma mgbe oge zuru oke mechara, Chineke zitere Ọkpara ya, nke nwanyị mụrụ, amụrụ n'okpuru iwu, 5 iji gbapụta ndị nọ n'okpuru iwu, ka anyị wee nata nkuchi dị ka ụmụ. 6 Ma n'ihi na unu bụ ụmụ, Chineke ezitela mmụọ nke Ọkpara ya n'ime obi anyị, na -eti mkpu na -asị, “Aba! Nna!" 7 Ya mere, ị bụghịzi ohu, kama nwa nwoke, ma ọ bụrụ na ọ bụ nwa, mgbe ahụ ọ bụ onye nketa site na Chineke.
(Jọn 3: 3-8) Ọ gwụla ma amụrụ mmadụ ọzọ ọ nweghị ike ịhụ alaeze Chineke
3 Jizọs zara ya, “N'ezie, n'ezie, ana m asị gị, ọ gwụla ma amụrụ mmadụ ọzọ ọ nweghị ike ịhụ alaeze Chineke. " 4 Nikọdimọs sịrị ya, “Olee otu a ga -esi mụọ mmadụ mgbe o mere agadi? Ọ̀ pụrụ ịbanye n'afọ nne ya nke ugboro abụọ ka a mụọ ya? " 5 Jisus zara, “N'ezie, n'ezie, asim unu, ọ gwụla ma amụrụ mmadụ site na mmiri na Mmụọ, ọ nweghị ike ịbanye n'alaeze Chineke. 6 Ihe a mụrụ site n'anụ ahụ bụ anụ ahụ, ihe a mụrụ site na mmụọ nsọ bụ mmụọ. 7 Ka ọ ghara iju gi anya na M'siri gi, Aghaghi imu unu ọzọ. 8 Ifufe na -efega ebe ọ chọrọ, ị na -anụkwa ụda ya, ma ị maghị ebe o si bịa na ebe ọ na -eje. Otú ahụ ka ọ dị onye ọ bụla a mụrụ site na Mmụọ. "
(1 Jọn 4:13) Anyị na -anọgide n'ime ya - n'ihi na o nyere anyị mmụọ ya
Site na nke a anyị maara na anyị na -anọgide n'ime ya, ya onwe ya na anyị, n'ihi na O nyere ayi nime Mọ -Ya.
Jizọs kwupụtara, "Mmụọ nke Onyenwe anyị dịkwasịrị m, n'ihi na o tere m mmanụ." (Luk 4:18) N'ezie, Chineke jiri mmụọ nsọ na ike tee Jizọs onye Nazaret mmanụ - ọ gara na -eme ihe ọma wee na -agwọ ndị niile ekwensu na -emegbu, n'ihi na Chineke nọnyeere ya (Ọrụ 10:38) n'otu aka ahụ ndị na -abịa mgbe Kraịst natara ike mgbe Mmụọ Nsọ bịakwasịrị ha (Ọrụ 1: 8, Ọrụ 4:31). Dị ka Jizọs, ekwesịrị ịgba akaebe maka ike anyị na mmụọ nsọ (1 Thess 1: 5, Rom 15:19, 1 Cor 2: 4-5). Anyị bụ ndị Chineke tere mmanụ. (2 Kor 1: 21-22; 1 Jọn 2:20)
(Luk 4: 18-19) Mmụọ nke Onyenwe anyị dịkwasịrị m, n'ihi na o tere m mmanụ
18 "Mmụọ nke Onyenwe anyị dịkwasịrị m, n'ihi na o tewo m mmanụ ikwusara ndị ogbenye ozi ọma. O zitewo m ikwusara ndị a dọtara n'agha nnwere onwe na ime ka ndị ìsì hụ ụzọ ịhụ ụzọ, ka m wee tọhapụ ndị a na -emegbu emegbu, 19 ịkpọsa afọ ihu ọma Onyenwe anyị. ”
Ọlụ Ndị Ozi 1: 4-8 (ESV), ị ga-enweta ike mgbe Mmụọ Nsọ dakwasịrị gị
4 Ma mb whilee Ya na ha nānọ, O nyere ha iwu ka ha ghara isi na Jerusalem pua; ma ichere nkwa nke Nna, nke, ọ sịrị, “ị nụrụ n'ọnụ m; 5 n'ihi na Jọn ji mmiri mee baptism, mana a ga -eji mmụọ nsọ mee unu baptism ụbọchị ole na ole site ugbu a. " 6 Ya mere, mb͕e ha zukọrọ, ha we jua ya, si, Onye-nwe-ayi, ọ bu n'oge a ka i gēme ka ala-eze ahu nye Israel? 7 Ọ sịrị ha, “Ọ bụghị ihe dịịrị unu ịma oge ma ọ bụ oge a kara aka nke Nna debere site n'ike nke aka ya. 8 Ma unu ga -anata ike mgbe Mmụọ Nsọ bịakwasịrị unu, unu ga -abụkwa ndị àmà m na Jeruselem, na n'ime Judia na Sameria niile, ruokwa nsọtụ ụwa. ”
Ọlụ Ndị Ozi 2:22 (Akwụkwọ Nsọ), nke Chineke gbara ọrụ dị ike na ihe ịtụnanya nke Chineke sitere n'aka ya mee
“Ndị Izrel, nụrụ okwu ndị a: Jizọs onye Nazaret, nwoke nke Chineke gbara unu akaebe site n'ịrụ nnukwu ọrụ na ọrụ ebube na ihe iriba ama nke Chineke sitere n'aka ya mee n'etiti unu, dịka unu maara
Ọrụ 10: 37-39 (Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ), Chineke ji mmụọ nsọ na ike tee Jizọs onye Nazaret mmanụ
37 unu onwe -unu matara ihe mere na Judia dum, malite na Galili mb thee baptism nke Jọn kwusara siri, 38 ka Chineke si were Mmụọ Nsọ na ike tee Jizọs onye Nazaret mmanụ. O wee na -eme ihe ọma, na -agwọkwa ndị niile ekwensu na -emegbu, n'ihi na Chineke nọnyeere ya. 39 Anyị bụkwa ndị akaebe nke ihe niile o mere ma n'obodo ndị Juu ma na Jerusalem.
Ọrụ Ndị Ozi 4: 24-31 (Mb) Ha niile jupụtara na Mmụọ Nsọ wee gaa n'ihu na-ekwu okwu Chineke n'atụghị egwu.
24 Mb͕e ha nuru ya, ha we kpọkue Chineke, si, Onye-nwe-ayi Jehova, Onye mere elu-igwe na uwa na oké osimiri na ihe nile di nime ha, 25 Onye sitere n'ọnụ nna gị Devid, ohu gị, kwuru site na Mmụọ Nsọ, sị, 'Gịnị mere ndị mba ọzọ ji wee iwe, ndị mmadụ wee na -akpa nkata n'efu? 26 Ndi -eze nke uwa guzoro onwe -ha, Ndi -isi zukọrọ imegide Onye -nwe -ayi na imegide Onye E Tere Mmanụ ya' - 27 n'ihi na ọ bu n'obodo a ka madu zukọrọ imegide ya ohu gị dị nsọ Jizọs, onye i tere mmanụ, Herọd na Pọntiọs Paịlet, tinyere ndị mba ọzọ na ndị Izrel, 28 ime ihe ọ bụla aka gị na atụmatụ gị buru ụzọ mee. 29 Ma ub͕u a, Onye-nwe-ayi, lekwasi okwu-ugha-ha anya, nye kwa ndi-orù-Gi iwu, 30 mgbe ị na -esetị aka gị iji gwọọ ọrịa, a na -emekwa ihe ịrịba ama na ihe ebube site n'aha ohu gị dị nsọ Jizọs. " 31 Mb whene ha kpesiri ekpere, ebe ha nọkọtọrọ na ya me nkpatu, ha niile wee jupụta na Mmụọ Nsọ wee gaa n'ihu na -ekwu okwu Chineke n'atụghị egwu.
(1 Ndị Tesalonaịka 1: 4-5) Ozi ọma anyị bịara n'ike na mmụọ nsọ
4 N'ihi na ayi matara, umu -nna Chineke huru n'anya, na Ọ rọputara unu; 5 n'ihi na ozi ọma anyị bịakwutere unu ọ bụghị naanị n'okwu, kamakwa n'ike na n'ime Mmụọ Nsọ na nkwenye zuru oke.
Ndị Rom 15: 18-19 (ESV), site n'ike nke ihe iriba ama na ọrụ ebube, site n'ike nke mmụọ Chineke
18 N'ihi na agaghị m ekwu okwu banyere ihe ọ bụla ma e wezụga ihe Kraịst mezuru site n'aka m iji mee ka ndị mba ọzọ rube isi - site n'okwu na omume, 19 site n'ike nke ihe iriba -ama na ihe -ebube, site n'ike nke Mo nke Chineke—Ya mere na site na Jerusalem na gburugburu ya ruo Ilirikọm, emechala m ozi nke ozioma nke Kraịst
1 Ndị Kọrịnt 2: 1-5 (NIV), na ngosipụta nke mmụọ nsọ na ike
1 Ma mụ onwe m, mgbe m bịakwutere unu, abịaghị m iji okwu dị elu ma ọ bụ amamihe na -ekwusara unu àmà nke Chineke. 2 N'ihi na m kpebiri na amaghị m ihe ọ bụla n'etiti unu ma e wezụga Jizọs Kraịst na onye a kpọgidere n'obe. 3 Mu na unu nọ -kwa -ra n'adịghị ike na n'egwu na n'oké ịma jijiji. 4 na okwu m na ozi m adịghị n'okwu ezi uche dị na amamihe, kama na ngosipụta nke Mmụọ na nke ike, 5 ka okwukwe unu ghara ịdabere n'amamihe mmadụ kama n'ike Chineke.
2 Ndị Kọrịnt 1: 21-22 (ESV), Chineke tere anyị mmanụ, nyekwa anyị mmụọ ya n'ime ma ọ bụ n'obi
21 Ọ bụkwa Chineke na -eme ka anyị na unu guzosie ike n'ime Kraịst, na etewo anyị mmanụ, 22 Onye kwa -kwa -ra ayi akàrà -ya, nye kwa ayi Mọ -Ya n'obi -ayi, ka ọ buru ihe -àmà.
1 Jọn 2:20, Onye Nsọ tere gị mmanụ
ma onye nsọ tee unu mmanụ, na unu niile nwere ihe ọmụma.
Ayi nwuru, elìe, we soro Kraist bilie: Ayi gēbuli obe-ayi soro Kraist. ( Matiu 16:24 ) Site ná nchegharị anyị anwụwo ná mmehie na mmụọ mbụ nke ụwa. (Kọl 2:20) E mere anyị ndị e mere baptizim baa na Kraịst Jizọs baptizim baa n’ọnwụ ya (Ndị Rom 6:3) E nyere anyị baptizim n’ọnwụ, ka e wee lie anyị na ya, ka e mere ka Kraịst si ná ndị nwụrụ anwụ bilie. anyị onwe anyị nwekwara ike ije ije n'ụzọ ọhụrụ nke ndụ. (Rom 6:4) Anyị kweere na ọ bụrụ na e mewo ka anyị na ya dị n'otu n'ọnwụ dị ka nke ya, anyị na ya ga-adịkwa n'otu ná mbilite n'ọnwụ dị ka nke ya. (Ndị Rom 6:5-11; Kọl 2:12-13; Kọl 3:1-4)
Luk 9: 23-24 (ESV), ka ọ gọnarị onwe ya ma bulie obe ya kwa ụbọchị wee soro m
23 O wee sị mmadụ niile, “Ọ bụrụ na onye ọ bụla ga -eso m, ya jụ onwe ya ma bulie obe ya kwa ụbọchị wee soro m. 24 N'ihi na onye ọ bụla nke chọrọ ịzọpụta ndụ ya ga -atụfu ya, ma onye ọ bụla tụfuru ndụ ya n'ihi m ga -azọpụta ya.
Luk 14: 25-27 (ESV), Onye ọ bụla nke na-adịghị eburu obe nke ya ma na-eso m enweghị ike ịbụ onye na-eso ụzọ m
25 Ugbu a oké ìgwè mmadụ sooro ya, ọ tụgharịrị wee sị ha, 26 “Ọ bụrụ na onye ọ bụla abịakwute m wee ghara ịkpọ nna ya na nne ya na nwunye ya na ụmụ ya na ụmụnne ya ndị nwanyị asị, ee, ọbụna ndụ nke ya, ọ pụghị ịbụ onye na -eso ụzọ m. 27 Onye ọ bụla nke na -adịghị eburu obe nke aka ya wee na -eso m apụghị ịbụ onye na -eso ụzọ m.
(Ndị Rom 6: 1-11) Ndị niile e mere baptizim n'ime Kraịst Jizọs, e mere ha baptizim n'ọnwụ ya
1 Gịnịzi ka anyị ga -ekwu? Ànyị ga -anọgide n'ime mmehie ka amara wee baa ụba? 2 Ọ dịghị ma ọlị! Kedu ka anyị nwere ike onye nwụrụ mmehie ka na -ebi n'ime ya? 3 Ị maghị na anyị niile ndị e mere baptizim n'ime Kraịst Jizọs bụ ndị e mere baptizim baa n'ọnwụ ya? 4 Ya mere, e liri anyị na ya site na baptism n'ime ọnwụ, ka, dị nnọọ ka e mere ka Kraịst si n'ọnwụ bilie site n'ebube nke Nna, ka anyị onwe anyị kwa wee na -ejegharị na ndụ ọhụrụ.. 5 N'ihi na ọ bụrụ na e jikọrọ anyị na ya n'ọnwụ dịka ya, anyị na ya ga -adị n'otu na mbilite n'ọnwụ dị ka nke ya. 6 Ayi mara na akpọgidere Ya na madu ochie ayi n'obe ka ewe me ka aru nke nmehie ghara idi irè, ka ayi we ghara ibu orù nke nmehie ọzọ. 7 N'ihi na onye nwụworo anwụ nwere onwe ya na mmehie. 8 Ma ọ bụrụ na anyị na Kraịst nwụrụ, anyị kwenyere na anyị na ya ga -adịkọkwa ndụ. 9 Anyị maara na ebe emere ka Kraịst si n'ọnwụ bilie, ọ gaghị anwụ ọzọ; ọnwụ enweghịzi ike n'ahụ ya. 10 Maka ọnwụ ọ nwụrụ, ọ nwụrụ maka mmehie, naanị otu ugboro, mana ndụ ọ na -adị, ọ na -adịrị Chineke. 11 Ya mere ị ghaghị na -agụnụ onwe unu ka unu bụ ndị nwụrụ anwụ maka mmehie na ndị dị ndụ nye Chineke n'ime Kraịst Jizọs.
Ndị Kọlọsi 2: 11-14 (ESV), ebe e liri gị na ya baptizim, nke e mere ka gị na ya si n'ọnwụ bilie
11 Nime ya kwa, e biiri unu ugwu site na obibi ugwu nke ejighị aka mee, site n'iwepụ anụ ahụ, site na ibi úgwù nke Kraịst, 12 ebe e liri ya na baptism, nke esitere na ya kpọlite ​​ya na ya site na okwukwe na ọrụ dị ike nke Chineke, onye mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie. 13 Ma unu, ndị nwụrụ anwụ site na njehie unu na ebìghị -úgwù nke anụ ahụ unu, Chineke mere ka ya na ya dị ndụ, ebe ọ gbaghaara anyị njehie anyị niile, 14 site n'ịkagbu ndekọ ndekọ ụgwọ nke kwụgidere anyị na ihe iwu chọrọ. O wezuga nka, kpọgide Ya n'obe.
Ndị Kọlọsi 2: 20-23 (ESV), Kraịst ka unu nwụrụ nye mmụọ nke ụwa
20 If gị na Kraịst nwụrụ nye mmụọ nke ụwa, gịnị kpatara, dị ka a ga -asị na ị ka dị ndụ n'ụwa, ka ị na -edo onwe gị n'okpuru iwu- 21 “Ejila aka, edetụla ire, emetụla aka” 22 (na -ekwu maka ihe niile na -ala n'iyi ka ejiri ya mee ihe) - dịka iwu na nkuzi mmadụ siri dị? 23 N'ezie ndị a nwere ngosi nke amamihe n'ịkwalite okpukpe mere onwe ha na ịchụnta ego na ịdị arọ n'ahụ, mana ha abaghị uru n'ịkwụsị imeju anụ ahụ.
Ndị Kọlọsi 3: 1-4 (ESV), a kpọlitere gị na Kraịst-n'ihi na ị nwụrụ
Jizọs sịrị: “Nne m na ụmụnne m ndị ikom bụ ndị na-anụ okwu Chineke ma na-eme ya.” (Luk 8:19-21). Ọbụrụ na anyị nọ n’ìgwè atụrụ ya, ọ bụ ihe dị Nna ụtọ inye anyị ala-eze ahụ (Luk 12:32–34). Jizọs ga-ekenye ndị na-eso ụzọ ya alaeze dị ka Nna nyere ya alaeze, ka ha nọrọ ọdụ n’ocheeze na-ekpe ebo niile ikpe. (Luk 22:28-30) Anyị kwesịrị ije ije n’ụzọ kwesịrị Chineke, onye na-akpọ anyị n’alaeze ya na otuto ya (1 Ndị Tesaịs 2:12). Ọ buru ụzọ mara ma yie anyị oyiyi nke Ọkpara ya, ka g eburu uzọ mụọ n'etiti ]tt ụmụnna (Ndi Rom 8:29). Jisos bu onye mbu n’ime ihe nile e kere eke n’ihi na Chineke anaputawo anyi n’ochichi nke ochichiri ma bufee anyi n’ala eze nke okpara ya o huru n’anya (Kol 1:13-15).
Ebe onye ahụ nke na-edo nsọ na ndị edoro nsọ niile nwere otu isi iyi, ihere adịghị eme Jizọs na-ezo aka n’ụmụ ndị ahụ a kpọrọ n’ebube dị ka ụmụnne (Hib 2:11). A ghaghŽ ime Jis]s ka ] dŽka umunne ya n'ihe niile, ka ] we gh] onye-isi nchu-aja nke nwere obi ebere na nke kwesŽkwasŽobi n'ijere Chineke ozi (Hib 2:17). Chineke ahọpụtala ndị ogbenye n’ụwa ka ha bụrụ ọgaranya n’okwukwe na ndị nketa nke ala-eze, nke o kwere ndị hụrụ ya n’anya nkwa (Jam 2:5). Jisus Kraist Onye-àmà kwesiri ntukwasi-obi, Onye eburu uzọ mu site na ndi nwuru anwu, emewo ayi ala-eze, ndi-nchu-àjà nye Chineke na Nna-Ya (Nkpughe 1:4-6). Ọ gbapụtara Chineke ndị mmadụ site n’ebo nile, asụsụ nile, ndị nile, na mba nile, ma mee ha ala-eze na ndị nchụàjà nye Chineke anyị, ha ga-achịkwa n’elu ụwa (Nkpughe 5:9-10). Ngọzi na nsọ ka onye ahụ na-ekere òkè na mbilite n’ọnwụ mbụ! N’ime ndị dị otú ahụ ọnwụ nke abụọ enweghị ike, ma ha ga-abụ ndị nchụ-aja nke Chineke na nke Kraịst, ha ga-esokwa ya chịa otu puku afọ (Nkpughe 20:6).
Luk 8: 19-21 (NW), Nne m na ụmụnne m nwoke bụ ndị na-anụ okwu Chineke ma na-eme ya
19 Nne ya na ụmụnne ya bịakwutere ya, mana ha enweghị ike ịbịakwute ya n'ihi igwe mmadụ. 20 Na a gwara ya, "Nne gị na ụmụnne gị nwoke na -eguzo n'èzí, na -achọ ịhụ gị." 21 Ma ọ zara ha sị,Nne m na ụmụnne m ndị nwoke bụ ndị na -anụ okwu Chineke ma na -eme ya. "
(Luk 12: 32-34) Ọ dị Nna gị mma inye gị alaeze
32 “Atụla egwu, ìgwè atụrụ nta, n'ihi na ọ di Nna -gi ezi utọ nye gị alaeze. 33 Sị ihe onwunwe gị, nye ndị nọ ná mkpa. Jirinụ akpa ego na-adịghị eme agadi, na akụ dị n'eluigwe nke na-adịghị ada ada, ebe onye ohi na-adịghị eru nso, ọ dịghịkwa nla na-ebibi. 34 N'ihi na ebe akụ gị dị, obi gị ga-adịkwa.
Luke 22: 28-30 (ESV), a na m enye gị otu alaeze dịka Nna m nyere m
28 “Unu bụ ndị mụ na ha nọ n'ime ọnwụnwa m, 29 na M na -enye gị otu alaeze dịka Nna m nyere m, 30 ka unu wee rie na a drinkụ na tebụl m n'alaeze m wee nọdụ n'ocheeze na -ekpe ebo iri na abụọ nke Izrel ikpe.
1 Ndị Tesalonaịka 2:12 (Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ)
anyị gbara onye ọ bụla n'ime unu ume ma gbaa unu ume ma nye unu iwu jee ije n'ụzọ kwesiri Chineke, Onye na -akpọku unu n'ime alaeze ya na ebube ya.
Ndị Rom 8: 28-30 (NIV), ka o wee bụrụ ọkpara n'etiti ọtụtụ ụmụnne
28 Anyị makwa na ihe niile na -arụkọ ọrụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya maka ọdịmma, maka ndị akpọrọ dịka ebumnuche ya si dị. 29 Maka ndị ọ buru ụzọ mara, o burukwa ụzọ kpebie ka ha kwekọọ n'oyiyi nke Ọkpara ya, ka o wee bụrụ ọkpara n'etiti ọtụtụ ụmụnne.. 30 Ma ndi ọ buru uzọ kpee, ọ kpọ -kwa -ra, ndi ọ kpọ -kwa -ra ka ọ gu -kwa -ra na ndi ezi omume, ndi ọ guru n'onye, ​​o nyekwara ha otuto.
Ndị Kọlọsi 1: 13-15 (ESV), O bufefewo anyị n'alaeze nke Ọkpara ya ọ hụrụ n'anya
13 Ọ napụtara anyị n'ọchịchịrị wee nyefee anyị n'alaeze nke Ọkpara ya ọ hụrụ n'anya, 14 Onye anyị nwere mgbapụta n'ime Ya, bụ mgbaghara mmehie. 15 Ọ bụ onyinyo nke Chineke a na -apụghị ịhụ anya, onye e buru ụzọ mụọ nke ihe nile e kere eke.
Ndị Hibru 2: 10-18 (ESV), ihere anaghị eme ya ịkpọ ha ụmụnne
10 N'ihi na o kwesiri ka onye ahu, onye ihe niile dị n'aka ya, site n'iweta ọtụtụ ụmụ n'ebube, kwesịrị ime ka onye nzọpụta ha zuo oke site na nhụjuanya. 11 N'ihi na onye na -edo nsọ na ndị edoro nsọ niile nwere otu isi. Ọ bụ ya mere na ihere anaghị eme ya ịkpọ ha ụmụnna, 12 si, “M ga -akọrọ ụmụnne m aha gị; n'etiti ọgbakọ ka m ga -abụ abụ otuto gị. " 13 Ọzọkwa, "M ga -atụkwasị ya obi." Ọzọkwa, "Lee, mụ na ụmụ Chineke nyere m." 14 Ebe ọ bụ na ụmụ na -ekerịta anụ ahụ na ọbara, ya onwe ya ritekwara otu ihe ahụ, ka o wee site n'ọnwụ bibie onye nwere ike nke ọnwụ, ya bụ, ekwensu, 15 ma napụta ndị niile site n'egwu ọnwụ nọ n'okpuru ịbụ ohu n'ogologo ndụ. 16 N'ezie, ọ bụghị ndị mmụọ ozi ka ọ na -enyere aka, kama ọ na -enyere mkpụrụ Abraham aka. 17 Ya mere a ghaghị ime ya ka ọ dị ka ụmụnne ya n'akụkụ niile, ka o wee bụrụ nnukwu onye nchụ -aja na -eme ebere ma kwesị ntụkwasị obi n’ijere Chineke ozi, iji kpuchiere Chineke mmehie ha. 18 N'ihi na ebe ya onwe ya tara ahụhụ mgbe a na -anwa ya, o nwere ike inyere ndị a na -anwa aka.
Jemes 2: 5, Chineke họọrọ ndị dara ogbenye ka ha bụrụ ndị nketa nke alaeze
5 Gee ntị, ụmụnna m m hụrụ n'anya, anụbeghị Chineke họọrọ ndị dara ogbenye n'ụwa ka ha baa ọgaranya n'okwukwe na ndị nketa nke alaeze, nke o kwere ndị hụrụ ya n'anya nkwa?
Mkpughe 1: 4-6 (ESV), mere anyị alaeze, ndị nchụàjà nye Chineke na Nna ya
Ka amara na udo dịrị ya site na onye dị adị na onye dị adị na onye ga -abịa, na mmụọ asaa ndị nọ n'ihu ocheeze ya, 5 na site Jizọs Kraịst bụ onye akaebe kwesịrị ntụkwasị obi, ọkpara onye nwuru anwu, na onye na -achị ndị eze n'ụwa. Nke onye hụrụ anyị n'anya ma jiri ọbara ya mee ka anyị nwere onwe anyị pụọ na mmehie anyị 6 me -kwa -ra ayi ala -eze, ndi -nchu -àjà nye Chineke na Nna -Ya, ka otuto dịrị ya ruo mgbe niile ebighị ebi.
Mkpughe 5: 9-10 (IGBOB), I mere ha ka ha bụrụ alaeze na ndị nchụàjà nye Chineke anyị
9 Ha wee bụọ abụ ọhụrụ, sị, “I kwesiri ka ị were akwụkwọ mpịakọta a wee mepee akara ya, n'ihi na e gburu gị, site n'ọbara gị. ị gbapụtara ndị mmadụ maka Chukwu n'ebo niile na asụsụ niile na ndị mmadụ na mba niile, 10 i we me ha ka ha buru ala -eze na ndi -nchu -àjà nye Chineke -ayi, ha gābu kwa eze n'elu uwa. "
Mkpughe 20: 6 (Mb) Ha ga -abụ ndị nchụaja nke Chineke na nke Kraịst, ha ga -esokwa ya chịa
6 Ngọzi na nsọ ka onye ahụ bụ onye na -ekere oke na mbilite n'ọnwụ mbụ! N'ime ụdị ọnwụ nke abụọ a enweghị ike, mana ha ga -abụ ndị nchụàjà nke Chineke na nke Kraịst, ha ga -esokwa ya chịa otu puku afọ.